Iyini isikweletu somthengi? Incazelo encwadzini yezezimali
Qala ukubolekisa Wiki umthengi credit
a umthengi credit libizwa nangokuthi isikweletu somthengi noma isikweletu sangasese. Ngokusho kwemali mboleko, kuyindlela ejwayelekile kakhulu yokusebenzisa isikweletu eJalimane. Ngaphansi kwe-Simple: Private Loan - Youtube, ungabona ividiyo echaza izici eziyinhloko zemali mboleko.
Isikweletu sabathengi: Ukusetshenziswa okuvamile
Njengoba leli gama lisho, isikweletu somthengi ngokuvamile sikhonza ukugcwaliseka kwesifiso esifushane futhi esibi kakhulu. Ngakho-ke, iziphuzo zokuphupha zivame ukukhokhelwa ngemali mboleko. Kuyafana nokuthenga imoto noma isethi sofa. Ukwengeza, abantu abaningi bakhetha inkokhelo enjalo ukukhokha isikweletu esabizayo kwi-akhawunti yamanje. Ngezikhathi zenzalo eziphansi ezenzalo, ukubolekwa kwemali yangasese kuyabonakala kahle, kanti izinga lesenzalo esincane alinalo, noma liye laba nomthelela omubi, amazinga ezithakazelo ezilahlayo.
Imalimboleko yomthengi iyimalimboleko yesitolimende, engeke ixazululwe kalula ngesifo esisodwa. Ibhange elikhiphe uhola ekupheleni ubude sasivumela eside, ngakho wokuthi ukuzihlukanisa ngokushesha SONKE wesikweletu ngokuvamile kungenziwa kuphela othathelwe inkokhelo ethile.
Noma ubani obolekisa isikweletu somthengi kufanele aqaphele ukuthi manje ubolekwe isikhathi seminyaka emithathu kuya kwemihlanu. Ngakho-ke, leyo mboleko ayikwazi ukwamukelwa inani elingenamkhawulo wezikhathi, ngakho-ke isiphetho kufanele sicatshangelwe ngokucophelela.
Isikweletu sabathengi: Indlela ephethwe ngayo
Imalimboleko yomthengi iyimboleko elula futhi engavumelekile: ngokuvamile isebenza ukugcwaliseka kwesifiso esizenzekelayo njengendlela yokuhamba ngomzuzu wokugcina. Iningi lamabhange lilungele lokhu, ukuze inkokhelo ingakhokhwa kuze kufike ku-EUR 5.000, ngosuku olufanayo, noma ihanjiswe ngqo ekushintsheni kwebhange.
Ukunikezwa kwemalimboleko kuyinto elula: ikhasimende linikezela inkontileka evumelekile yomsebenzi kanye nezitatimende zemholo ezinyangeni eziyisithupha zokugcina. Endabeni yabantu abaziqashile, amaresidi okukhokha ezinyangeni eziyisithupha zokugcina kufanele afaneleke. Uma inkokhelo ejwayelekile ingatholakala, i-credit iyalwa noma ikhokhwa ngokushesha. Ukuphakama ngokuvamile kuvame izinyanga ezintathu, okungajwayele ukuhlanganiswa kancane. Mayelana ne-EUR 5.000, - yiyona enkulu engakhokhwa ngokwemigomo yomboleko wabathengi.
manje abantu abaningi abaqashwe imisebenzi yesikhashana, okuyinto ngokuyisisekelo abolekise endleleni: Ikhredithi umthengi has a esingangaleso sokukhokha imali esinqunywe kweminyaka eminingi, lapho othile ogama umsebenzi kukhawulwe izinyanga eziyishumi nambili ayikwazi ukuqinisekisa. Ngenxa yezinga eliphansi lezinzalo kanye nesimo esihle sokuqashwa eJalimane, amabhange aseba nomusa kakhulu lapha. Kucatshangwa ukuthi umuntu onesivumelwano somsebenzi wesikhashana uzothola umsebenzi ohlukile, ngakho-ke isicelo sokuboleka imali sivunywa.
Ikhredithi umthengi ngokuvamile exhumene abanye ulwazi Schufa: Ubani okufakile ezimbi lapha ongajwayele ukuthola loan mbuzo. Kodwa-ke amabhange aye asabela ngalokhu: amabhange amaningi namuhla anamabhange ase-intanethi njengezinsizakalo, ezitholakala phesheya. Imithetho eqinile yaseJalimane ayisebenzi lapha. Ngakho Ikhasimende lingakhetha isicelo loan inthanethi bese ku-intanethi kusukela ebhange efanayo kwadingeka noma sinqatshiwe udumo umthengi kwi-counter. Ikhredithi yomthengi ku-intanethi ibiza kakhulu kunekhredithi yomthengi ku-counter, kodwa kungenjalo kunezimo ezifanayo. Lokhu oyibamba ukwakhiwa kunalokho kungazwakali libonisa, lokho sekuyisikhathi sokucabanga ngomuntu zwe kuphela ngokuqondene Schufa abolekise ezikhathini intanethi yebhange.
Isihloko esilandelayoBanking Act